Soo dejisan 360 Security 3.9.8.5308 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: 360 Security
360 Security – software ah oo awood leh si ay u siiyaan ilaalinta iyo la kordhiyo waxqabadka qalab. software wuxuu isticmaalaa farsamooyinka casriga ah ilaalinta ka dhan ah dayacanka nidaamka, xatooyo xogta qarsoodi ah, adware iyo TROJAN. 360 Security kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan iskaanka deg deg ah ama qoto dheer oo ka mid ah geedi socodka socda joogitaanka of code a xaasidnimo. software waa ay awoodaan in ay nadiif ah xusuusta oo ka mid ah codsiyada dhiibida, khasnado, files aan loo baahnayn ama ku meel gaar ah APK. Sidoo kale 360 ​​Security ku jira Tababaraha codsiga, module tamar kaydsiga iyo filter ku furid ah wicitaanada hayay iyo SMS ah.
Skaanka iyo saarista fayrusyada
Management of codsiyada
Soo dejisan 360 Security
Faallo ku saabsan 360 Security
360 Security Xirfadaha la xiriira